Arsene Wenger Oo Iska Casilaaya Hoggaanka Kooxda Arsenal 22 sano kadib • Oodweynenews.com Oodweyne News
Arsene Wenger Oo Iska Casilaaya Hoggaanka Kooxda Arsenal 22 sano kadib
Waxaa lagu wadaa in tobabaraha kooxda Arsenal uu ka tago kooxda dhamaadka xilli ciyareedka,waxa uu maamulaha kooxdan ahaa ku dhawaad 22 sano. Ninkan oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa ka tagaya kooxdiisa sanad un ka hor inta uu qandaraaskiisa dhicin .
Wenger oo 68 sano jir ah ayaa ku guulaystay 3 horyaal ee Ingiriiska iyo 7 koob ee FA,iyadoo uu laba mar ugu guulaystay 1998kii iyo 2002 dii. “Aad ayaan faraxsanahay inaan hellay fursad aan ugu adeego kooxdaan oo ii leh xasuus aad u badan ” ayuu yiri Wenger oo muddo badan wajahayay baaqyo kaga imanayay taageerayaasha kooxda oo ah in uu is casilo.
“Dhammaan dadka jecel kooxda Arsennal waa inay ilaaliyaan qiimaha ay leedahay kooxdaan” Kooxda Arsenal ayaa sheegtay in la magacaabi doono tobabaro kale sida ugu dhaqsaha badan
Arsenal ayaa barta Twitter-ka ku shaacisay in uu Wenger kooxda ka tagaayo, Shakhsiga ugu saamiyadda badan ee Arsenal oo lagu magacaabo Stan Kroenke ayaa maalinta jimcaha yiri sidaan “waa mid ka mid ah maalmaha noogu adag intii aan ku jirnay ciyaaraha”
Waxa uu ku daray “ujeedada ugu weyn ee aan Arsenal ugu lugta hayn ayaa ah in Arsene in kooxda la qaatay mar xalad walbo” Waxaa loo magacaabay xilkaan1 bishii October , 1996, waxa uu na haatan yahay qofkii ugu waqtiga dheeraa ee xilkan qabto waxaa uuna wacdaro ka dhigay 823 ciyaarood.
Balse qaar ka mid taageerayasha ayaa Wenger ku kacsanaa labadii sano ee la soo dhaafay ka dib markii ay kooxda kala kulantay natiijo xumo ciyaaraha horyaalka. Waxa ay kooxda Arsenal ka dambaysaa 33 dhibcood kooxda man united horyaalka oo ku hogaaminaya 87 dhibcood ,waxaa sidookale hoos ka jira kooxda west Brom haysata 21 dhibcood.
Wenger waxa uu qaaday sadex koobabka Premier League iyo afar koobabka FA loo yaqaano 9kii sano ee ugu horeysay ee uu xilka hayay. Intii u dhaxaysay 2003-illaa 2004-tii waxa uu noqday maamulihii ugu horeeyay ee koox Ingiriis ah hoggaamiyo, taas oo aanan laga badinin laga soo bilaabo sanadkii 1889-kii.
Markii ay ku guuleysteen koobka FA sanadkii 2005-tii, waxa ay ku qaadatay sagaal sano oo kale in uu qaado koob kale. Waxa uu la tacaalayay sidii uu uga sii mid ahaan lahaa horyaalka Yurub tan iyo markii ay ka badisay kooxda Barcelona sanadkii 2006-dii.
Sanadkii 2006-kii ayay kooxda Arsenal u guurtay garoonka Emirates oo lagu dhisay £390m oo lacagta Ingiriiska ah. Bishii Janaayo waxa uu qaatay Pierre-Emerick Aubameyang , kulana soo wareegay lacag dhan £56m.